Ala na-ebi ndụ na 01: Border vs. Amazon Email Marketing | Martech Zone
Ọ bụrụ n’inweghị ụlọ ahịa dị n’okpuru gị ka ọ gbaghara, ọ dị m nwute. Ọ bụrụ na ịmee, ị nwere ike ịmasị saịtị a nke ala malitere, Border Live na 01:
Chaị… akwụkwọ, ndụ egwu na Kọfị kacha mma nke Seattle! Nke ahụ dị ka eluigwe maka m!
Ọ na-egosikwa na Ibe ala Akwụkwọ Ozi Email enwetabeghị mgbanwe, ọ na-atọ ụtọ ịgụ ugbu a. N'ala n'ezie na-emeri agha email! Were a lee anya na ntughari a Amazon email:
Tags: amazonalaemail imeweemail nkeonwe
Ọ dị ịtụnanya ihe ịgbanwe mgbanwe gị nwere ike ime maka akwụkwọ akụkọ email / weebụsaịtị gị. O nwere ike buru gị si blah ka ihe na-atọ ụtọ! Ha rụrụ nnukwu ọrụ!
Ekwenyere m na ha mere ezigbo ọrụ! Enwere m ike ịnụ isi kọfị. oops na m na kichin! Enwere m mmasị na echiche ahụ!